MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA: “Aqoonsiga Soomaaliya ay heshay ma ahan mid cid gaar ah lagu dhibaateynayo” | Codka Soomaalida Online	Sunday, March 9th, 2014	Home ENGLISH
MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA: “Aqoonsiga Soomaaliya ay heshay ma ahan mid cid gaar ah lagu dhibaateynayo” Published on January 31, 2013 by · No Comments Khamiis, Jannaayo 31, 2013— Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jawaabayay hadal uu Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ku sheegay in aqoonsigii uu siiyay Mareykanka dowladda Soomaaliya aanu quseyn Somaliland.
“Waxaa qabaa in aqoonsiga dowladda Mareykanka iyo Midowga Yurub ay siiyeen dowladda Soomaaliya aysan ahayn mid cid gaar ah lagu lug-goynayo ama lagu dhibaateynayo. Aqoonsigaas ma ahan mid ay dan gaar ah ugu jirto Xasan Sheekh, reer hebel uma sameyneyso dan gaar ah, balse Soomaaliya oo dhan ayuu macno u sameynayaa. Somaliland inay ka faa’iiddo mooyee wax kale oo dhib ah ugama imaanayaan,” ayuu yiri Xasan Sheekh oo BBC-da la hadlayay.
“Mowqifkeenna horay ayaan u caddeynay, waxaan rabnaa in Soomaaliya la mideeyo, dagaal kuma mideyneyno, cidna culeys ma saareyno, laakiinse waxaa billowday wadahadal wixii aan isku af-garanno ayaa shaqeynaya. Somaliland iyo Puntland colaad gooni uma hayno, aqoonsiga waa mid faa’iido u wada ah Soomaalida oo dhan, dadka Soomaaliyeed ayaa u caddeynaynaa, faa’iidada magacaas ku timaada Soomaaliya oo dhan ayay wada-gaareysaa,” ayuu madaxweynuhu ku yiri wargeysigiisa.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in Soomaaliya ay sharaf iyo karaamo ku yeelan karto midnimada, taasna ay u tahay faa’iido weyn u tahay Soomaalida oo dhan, isagoo xusay inay ka go’an tahay inay xaqiijinayaan maslaxada ummadda Soomaaliyeed.